Iindaba malunga ne-OnePlus: ukwazisa, ii-mobiles, iingcambu kunye nokunye - i-Androidsis | I-Androidsis
I-OnePlus ngumenzi weefowuni owasekwa e-China. Ngenye yeenkampani zakutshanje kwi-Android, esele isekwe kwi-2013. Inikezelwe ikakhulu ekusungulweni kwee-smartphones, nangona zikwasebenza kwezinye iimveliso ezinje ngeTV yabo. Luphawu olugxile ekusungulweni kweefowuni ngaphakathi kuluhlu oluphezulu.
I-OnePlus imele iqhinga layo lokumilisela iifowuni ezimbalwa ngonyaka (zihlala zimbini). Ezinye iimodeli ezimele zichazwe kakuhle kunye namaxabiso afikelelekayo kuluhlu lwazo. Apha uya kuba nakho ukufumana zonke iindaba, iindaba kunye nokuphononongwa kweefowuni ze-OnePlus nge-Android njengenkqubo yokusebenza.
Yonke into onokuyilindela kwi-OnePlus 9T: izinto ezinokwenzeka, iinkcukacha, amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa
por UAron Rivas yenzayo Iinyanga ze3 .
I-OnePlus 9T yi-smartphone elandelayo evela kumenzi waseTshayina oza kuphehlelelwa. Kuninzi okulindelweyo kule mobile….
I-OnePlus Nord CE 5G ibhengeziwe nge-Snapdragon 750G kunye nexabiso elifikelelekayo ngokwenene
I-OnePlus ibhengeze ukuba loluphi uluhlu lwayo olutsha lokungena emva kwamahemuhemu amaninzi malunga neempawu zayo, ...
por UAron Rivas yenzayo Iinyanga ze8 .
I-OnePlus ekugqibeleni ityhile ii-smartphones zayo ezintsha ze-OnePlus 9 njengezona zibalulekileyo ...
Isenzi sensor seSony IMX789 ukuya kwi-OnePlus 9 kwaye iza nokurekhodwa kwevidiyo ye-4K kwii-120fps
por UAron Rivas yenzayo Iinyanga ze9 .
Ukulindela okujikeleze i-OnePlus 9 kuphezulu, kwaye ayenzelwanga nto. Sithetha ngenqanawa elandelayo ...
Ikhamera ye-OnePlus 8T ilungile, kodwa ayilinganisi ukuya kwinqanaba eliphezulu [Uqwalaselo lwekhamera]
Ngesizukulwana ngasinye esitsha sefowuni eziphezulu, iimfuno zabasebenzisi kwinqanaba lokufota zikhulu, isizathu ...
I-OnePlus Nord ifumana i-OxygenOS 11 ezinzileyo kunye ne-OnePlus 7 kunye ne-7T uthotho lwe-Open Beta 3
I-OnePlus ngoku ibonelela ngohlaziyo lwesoftware kwii-smartphones zayo ezininzi. I-OnePlus Nord, okwangoku, ...
Ngomhla wama-23 kuMatshi iya kuba ngumhla wokukhutshwa kwe-OnePlus 9 kunye ne-OnePlus Watch
por UManuel Ramirez yenzayo Iinyanga ze9 .
Inokuba ngo-Matshi 9 xa inkampani yaseTshayina iqinisekisa ukuphehlelelwa kuthotho lwe-OnePlus 9 ye ...
I-OnePlus Nord ihlaziywa nge-OxygenOS 10.5.11 kwaye ifumana indawo yokhuseleko kaJanuwari
I-OnePlus ikhuphe uhlaziyo lwesoftware entsha ye-OnePlus Nord efika njenge-OxygenOS 10.5.11. Oku kuza njenge ...
Ityhile inxenye yeempawu ze-OnePlus 9
por UNerea Pereira yenzayo Iinyanga ze9 .
Inyaniso kukuba ukuvuza okunxulumene ne-OnePlus 9 kunye ne-OnePlus 9 Pro akuyeki ukufika.Siyazi ukuba ...
I-OnePlus 9 kunye ne-OnePlus 9 Pro ziya kubandakanya itshaja ebhokisini
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze10 .
Ngalo lonke ixesha kukho utshintsho kwimeko ye telephony, kwiinyanga zokuqala (ukuya ...
Le yindlela i-OnePlus 9 Pro ejongeka ngayo kwiifoto zokwenyani: uyilo kunye neekhamera eziza kuzisebenzisa zihluziwe [+ Ividiyo]
Kukho amarhe amaninzi athetha ngeempawu kunye nokubalulwa kobuchwephesha kwi-OnePlus elandelayo 9. Uninzi lwe ...
Yenza iselfowuni yakho ibe yeyakho kunye nale yamaphephadonga e-OnePlus 5T
Fumana i-OnePlus 5T ngesaphulelo esisodwa eBanggood
I-OnePlus 5T ibhengezwe ngombala obomvu
Khuphela imifanekiso yamaphephadonga entsha ye-OnePlus 5T
Le yi-OnePlus 5T kwaye oku kukucaciswa kwayo kokugqibela
I-OnePlus ipapasha ifoto yokuqala esemthethweni ye-OnePlus 5T
I-OnePlus 5T inokuba neekhamera ezixabisa kakhulu kolu shishino
Isisombululo kwi-Oneplus 2 yokuhlaziya iingxaki nge-OTA